Wholesale Strong base anion exchange resin Mugadziri uye Mutengesi | Dongli
Yakasimba Base Anion (SBA) mapuroteni akagadzirwa nepolymerizing styrene kana acrylic acid uye divinylbenzene uye chlorination, amination.
Dongli kambani inogona kupa gel uye macroporous mhando SBA resins ine akasiyana crosslink. Yedu SBA inowanikwa mumatanho mazhinji anosanganisira OH mafomu, saizi saizi uye giredhi rekudya.
Resins Chimiro chePolymer Matrix Chitarisiko Fomu Kuonekwa RinoshandaBoka
Yese Shanduro Kugona meq / ml Mhepo Yemukati Particle Saizi mm KuzvimbaCl→ OH Max. Kutumira Kurema g / L
GA102 Gel Rudzi I, Poly-Styrene ine DVB Yakajeka kune Slight Yero Spherical Beads R-NCH3
GA104 Gel Rudzi I, Poly-Styrene ine DVB Yakajeka kune Slight Yero Spherical Beads R-NCH3
GA105 Gel Rudzi I, Poly-Styrene ine DVB Yakajeka kune Slight Yero Spherical Beads R-NCH3
GA107 Gel Rudzi I, Poly-Styrene ine DVB Yakajeka kune Slight Yero Spherical Beads R-NCH3
GA202 Gel Rudzi rwechipiri, Poly-Styrene ine DVB Yakajeka kune Slight Yero Spherical Beads RN (CH3)2(C2H4OH)
GA213 Gel, Poly-Acrylic ine DVB Bvisa Spherical Beads R-NCH3
MA201 Macroporous Type I Polystyrene ine DVB Opaque Mabheji Quaternary Amoniamu
MA202 Macroporous Type II Polystyrene ine DVB Opaque Mabheji Quaternary Amoniamu
MA213 Macroporous Poly-Acrylic ine DVB Opaque Mabheji R-NCH3
1. Chengeta imwe mvura
Ion exchange resin ine imwe huwandu hwemvura uye haifanire kuchengetwa mumhepo. Munguva yekuchengetera uye kutakurwa, inofanirwa kuchengetwa yakanyorovera kudzivirira kuomesa mweya uye kupera mvura, zvichikonzera kuputswa kwebwe. Kana iyo resin yakashayiwa mvura panguva yekuchengetera, inofanirwa kunyoroveswa mune yakanyoroveswa mvura yemunyu (25%), uye wozosvinudzwa zvishoma nezvishoma. Haifanirwe kuiswa zvakananga mumvura, kuitira kuti idzivise kuwedzera nekukurumidza uye kuputswa resin.
2. Chengeta imwe tembiricha
Munguva yekuchengetedza uye kutakura munguva yechando, iyo tembiricha inofanirwa kuchengetwa pa5-40 ℃ kudzivirira supercooling kana kupisa zvakanyanya, zvinozokanganisa mhando. Kana pasina chakadziya chekudzivirira michina munguva yechando, iyo resin inogona kuchengetwa mumvura ine munyu, uye kusangana kwemvura yemunyu kunogona kutemerwa zvichienderana netembiricha.
3. Kusachena kusabviswa
4. Kugara uchishandisa activation kurapwa
Mukushandisa, iyo resin inogona kudzivirirwa kubva mukudzikiswa zvishoma nezvishoma nesimbi (senge simbi, mhangura, nezvimwewo) mafuta nema organic mamorekuru. Iyo anion resin iri nyore kusvibiswa nezvinhu zvehupenyu. Inogona kunyoroveswa kana kushambidzwa ne10% NaC1 + 2-5% NaOH yakavhenganiswa mhinduro. Kana zvichidikanwa, inogona kunyoroveswa mune 1% hydrogen peroxide mhinduro kwemaminetsi mashoma. Dzimwe nzira dzinogona zvakare kushandiswa, dzakadai seasidhi alkali imwe nzira yekurapa, kurapwa kwevhita, kurapwa kwedoro uye dzakasiyana nzira dzekudzivirira.
Pashure: Macroporous chelation resin
Zvadaro: Asina kusimba asidi cation yekuchinjana resin